Ity no Apple TV 4K (2021) vaovao | Vaovao IPhone
Ity no Apple TV 4K (2021) vaovao
Ny orinasa Cupertino dia nanavao ny vokatra manaitra indrindra amin'ny resaka trano mifandray, ny Apple TV. Betsaka ny zavatra nolazaina nandritra ny volana maro momba ny fanavaozana izay Apple TV 4K notakiana, indrindra noho ny filàna mihamitombo fangatahana fangatahana mihabe.
Apple dia tsy nangataka zavatra bebe kokoa ary nanolotra fanavaozana kely dia kely ny Apple TV 4K miaraka amin'ireo fiasa vaovao noho ny fitaovana vaovao nohavaozina. Na eo aza ny zava-drehetra, ny fanatsarana dia tao anatin'ny baiko vaovao hifehy azy ary indrindra amin'ny herin'ny atiny anatiny.
Ho fanombohana, ny fitaovana dia hametaka ny processeur Apple A12 Bionic vaovao an'ny orinasa, avelany ao aoriany Apple A10 izay nametaka ny maodely teo aloha. Tsy niresaka momba ny haitao playback izy ireo, satria mijanona ao amin'ny Dolby Vision sy 4K, raha toa ka nanampy ny fampiharana Apple Remote TV izay ahafahantsika manitsy ny loko navoaka mba hanolorana izay tena tadiavin'ny indostria ho hitantsika na inona na inona toerana misy ny fahita lavitra. Ankasitrahana indrindra izany, satria ny fisian'ny efijery ny ankamaroan'ny mpampiasa dia mamela zavatra maro irina.
Ny andraikitra voalohany dia ny Siri Remote, izay nahazo fanovana ankehitriny izay hametraka fanontaniana vitsivitsy momba izany. Manana kodiarana mikasika eo an-tampony izahay ary mihoatra na latsaka ny bokotra mitovy no mitazona. Ny mpanara-maso izao dia manana fefy vy somary matevina kokoa noho ny Siri Remote ary ny bokotra Siri dia hifindra eo anilan'ny mpanara-maso, very ny fahatanorany, noho izany dia fantatray fa manomboka miala amin'ny adin'ny virtoaly mpanampy azy i Apple. Ny Apple TV 4K (2021) dia azo tehirizina amin'ity zoma 23 aprily ity ary manomboka hatolotra amin'ny Mey, ho an'ny € 189 ho an'ny kinova 32GB ary € 229 ho an'ny kinova 64GB.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Ity no Apple TV 4K (2021) vaovao
Tonga ny iPad Pro vaovao miaraka amin'ny fampiasa "Pro" tena miavaka
Apple Mampiditra New iMac amin'ny M1 Chip